DFS oo sheegtay in la dilay saraakiil iyo dagaalameyaal ka tirsan Al-Shabaab | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka DFS oo sheegtay in la dilay saraakiil iyo dagaalameyaal ka tirsan Al-Shabaab
DFS oo sheegtay in la dilay saraakiil iyo dagaalameyaal ka tirsan Al-Shabaab
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la dilay saraakiil iyo dagaalameyaal ka tirsan Al-Shabaab, ka dib markii Ciidamada dowladda iyo kuwa Darawiishta Jubbaland howlgallo wadajir ah ka sameeyeen degaano ka tirsan gobalka Jubbada Hoose.
Guddoomiyaha degaanka Buulo-Gaduud, Mahad Mataan Buulle oo la hadlay Warbaahinta dowladda ayaa sheegay in howlgalka ay sameeyeen Ciidamada lagu dilay ilaa 10 isugu jira saraakiil iyo dagaalameyaal ka tirsan Al-Shabaab.
Guddoomiyaha ma sheegin magacyada saraakiisha iyo xilalka ay ka hayeen gudaha Al-Shabaab.
Saraakiisha howlagalka hoggaamineysay ayaa sheegay in ay si gaar ah howlgalka uga fuliyeen degaannada, Koban, Araare, Lafaha-Ragga iyo Xero–Shiid kuwaas oo dhamaantood u dhaw degaanka Buula–Gaduud ee gobalka Jubbada Hoose.
Guddoomiyaha waxaa uu sidoo kale, sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay, isla markaana la doonayay in Al-Shabaab looga saaro degaannada howlgalka laga fuliyay.
Marka laga soo tago sheegashada ciidamada dowladda, ma jiro war ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan howlgalladan.